Mhepo turbine gearbox zvikamu & mutengo vanogadzira mapuraneti
Mhepo turbine gearbox vagadziri
Mhepo Turbine Yakakwira Simba Yekutumira Gearbox
Giya rebhokisi rinowanzo shandiswa mumhepo turbine kuti riwedzere kutenderera kubva kune yakaderera-kumhanya rotorota kuchikwira kumhanya kumagetsi jenareta.Iye gearbox rakanakisa pamutengo wepamusoro.
Kwemakumi emakore, isu takagadzira yakagadzirirwa mhepo-turbine gearbox uye zvikamu, tinoda kuwanda kumhanya kwemhepo turbine nekukasira uye kuendesa kune iyo jenareta yemagetsi.
Seyakazara renji gearbox mupi wekushandisa simba remhepo, isu tine akawanda-megawatt chiitiko cheWind Turbine Gearbox Technology & Innovation, nemagiya ane carburized akakwirira mumagadzirirwo ebhokisi, kuvandudza kuvimbika kwemabhokisi emagetsi turbine.
Nemakore eruzivo rwekugadzira, tinogona kugadzira mabhokisi emagetsi maererano nezvinodiwa nevatengi. Isu tiri mamwe emakambani mashoma ane tsvakiridzo uye ekuvandudza masimba.Mhinduro dzakasimba dze mhepo turbine gearbox zvikamu zvinoongororwa uchishandisa huwandu.
Tine makore mazhinji ekugadzirwa kwechiitiko, rakanakisa R&D timu, uye yedu yekutengesa-sevhisi iripowo.Mazhinji emabhokisi emagetsi pa1.5 MW akayera simba renji yemagetsi turbines anoshandisa imwechete- kana maviri-danho replanet gearing system.
Nongedzo nyowani dzinovimbisa dzakavimbika mhepo-turbine gearboxes, Sogears advanced technology solution inobatsira mukushandurwa kwesimba renyika system, Dhizaini yemhepo turbine gearbox zvine ruzha., Ine yakavimbika, yakasimba uye inoshanda magiya emabhokisi emhepo turbines. imwe / multistage, mapuraneti, helical, kukurumidza kuwedzera gearbox. Kusimudza simba remhepo mhepo uye kuvimbika kweiyo yakanakisa kukosha. Isu tinogadzira mhepo turbine gearboxes mune masimba 55kW, 250 kW uye 500 kW mukubatana kwehunyanzvi.
Sevatungamiriri Vanotungamira vekugadziriswa tekinoroji uye basa mu Wind Turbine Gearbox Kugadzira, isu tinopa kune ese epasi rose, kusanganisira China, India, USA, Europe, NESE Yedu Wind Mill Gearboxes, High Capacity Wind Turbine Drive Gear Box.
Chinhu chinongedzo chinoshandiswa In Wind Power System
Isu tinopa yepamusoro, zvigadzirwa zvemutengo wakaderera. Madiki emhepo turbines padanho re kW remagetsi akaomeswa haadi kushandiswa kwegearbox. Iyo mhepo-turbine gearbox inoita basa rekuwedzera kumhanya kweinjini turbine nekuwanda uye kuendesa kune iyo jenareta yemagetsi.
Mamwe magiya mabhokisi anoda
Hazvina kukosha zvishoma pakuchengetedza kwakaringana kuti uzive zvirinani nezvemhando dze turbine gearbox mhando uye maumbirwo avo. Bhokisi remhepo-turbine giya rinotora chinzvimbo mukuwedzeredza kumhanya kweturbine yemhepo nemakumi uye nekuitumira kune inogadzira magetsi.
Cuctomize Yangu Gearbox Zvino
Isu tinokoshesa yega yega yekubvunza kwako